archana: May 2011
वाहु!! मेरो ड्रिमल्यान्ड
यसपाली राजेश हमाल र करिस्माको फिल्म "यो मायाले लौन के गर्‍यो" ओस्कारमा छानिएछ ।
यती राम्रो बिषय बस्तु, यस्तो टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको देखेर हलिवूडबाट केही मान्छे आउँदैछन् रे सिक्न।
हलिवूडकै कुरा गर्दा मेरो धेरै साथीहरु अमेरिकाको हवाइमा घुम्न जादै छन खै भिजिट अमेरिका २०११ रैछ ।
नेपालमा खुब प्रचार गरेको गरै छन्। आखिर तिनीहरुको देशमा घुम्न गै दिने नेपालीहरु नम्बर १ देश पर्छ नि ।
घुम्नेकै कुरा गर्दा नेपालीहरु इजिप्ट पनि त खुब जान्छन नि तर त्यहाँ त खुब बन्द हडताल हुन्छ रे, कस्तो होला है बन्द भनेको नेपालिलाइ कहिले भोग्नु परेको भए पो? त्यसैले नेपालीलाई अली सेफ छैन भनेर नेपाली सरकारले सतर्क गरी सकेको छ।
सतर्ककै कुरा गर्दा यसपाली हामीले धेरै भन्दा धेरै पानी प्रयोग गर्नु पर्ने छ किन कि पानीको मुहानमा यती धेरै पानी जम्मा भएछ कि ओभर फ्लो हुने डरले प्रत्येक घरले ३० हजार लिटर बढी फ्रीमा चलाऊन पाउने भएका छन्।
चलाऊनेकै कुरा गर्दा पूर्व मेची देखी पश्चिम महाकाली सम्म अप्टिकल फाइबर ओछायाएकोले इन्टरनेट अत्यन्त छिटो भएकोले नेपालको यस्तो भुपेरिबेस्टिक देशमा त जमिन मुनी अप्टिकल फाइबर छ भने अष्ट्रेलियामा पनि पुरै अष्ट्रेलियामा कसरी छिटो ईन्टरनेट चलाऊन सकिन्छ भनेर त्यताबाट केही प्राबिधिकहरु प्रबिधी हेर्न आउने भएका छन्।
आउनेकै कुरा गर्दा नेपालमा मास्टर्श सम्म पढाई फ्री र विश्वब्यापी मान्यता भएकोले यूरोप तिरका विधार्थीको ताती छ ।अस्ती एकजना लण्डनको केटीको ब्लग हेरेको उसको सपना भनेकोनै नेपाल गएर पढ्नु रहेछ, तीन चोटि भिसा अप्लाई गर्दा नि पाएकी रैनछीन् । बिचरीले यसपाली पनि कोशीस गर्ने छु भनेर लेखेकी छिन् ।
लेख्नेकै कुरा गर्दा हाम्रो बुद्धी सागरले लेखेको कर्णाली ब्लुज विश्वभरका पाठकले एकै चोटि पढे, खै त्यो जे के रोलिङ भन्ने ले पनि ह्यारी पोर्टरको अर्को भाग कर्णाली ब्लुज जस्तै बनाउने प्रेरणा लिएकी छिन् रे।
लिनेकै कुरा गर्दा नर्बेले हाम्रो देशबाट ६० बिलियन उधारो लिएको थियो रे खै तिर्ने खोजी गर्दैन। अस्ती एउटा जापानिजले नेपालको खुब तारिफ गर्दै थियो त्यहाँ भुइचालो आउँदा नेपालले टन्नै सहयोग गरेको रहेछ।
सहयोगकै कुरा गर्दा नेपालको शिक्षादर १००% छ तर साउथ कोरियाको महिला शिक्षादर ९७.३% भएकोले सबै महिला शिक्षित भए परिवार हुन्छ र परिवार शिक्षित भए देश् बलियो हुन्छ भनेर शिक्षादर १००% बनाउन नेपालबाट ३ बिलिएन पाएछन्।
पाउनेकै कुरा गर्दा आजकाल टि.भीमा बच्चा पाउ पाउ भनेर खुब बिज्ञापन आउछ। नेपालको जन संख्या कम भएकोले बढाउन आईमाईलाई एक बर्ष तलबी बिदा र १० लाख उपहार नि पाउने भएका छन तर ह्या बुढेसकालमा सरकारले पाली हाल्छ किन बच्चा सच्चा पाएर किन टेन्सन लिनु भनेर तेती वास्ता गरेका छैनन्।
वास्ता कै कुरा गर्दा दुबइ, कतार, साउदी अरब, मलेसिया, सिङापुरबाट लेबर कामको लागि आउनेले पनि श्रीमती र छोरा छोरी ल्याउन पाउने भएका छन। हाम्रो देशले काम मात्रै गराउने होइन कामदारको परिवारको नि कती वास्ता गर्छ भन्ने उदाहरण हो यो । नेपालको यस्तो नयाँ नियमले गर्दा ति देशका परिवारजनमा धेरै खुशि ल्याएछ।
खुशी कै कुरा गर्दा यि माथिका कुरा सोच्दा पनि कती मन खुशी हुन्छ, आन्दित हुन्छ, प्रफुल्ल हुन्छ,रोमन्चित हुन्छ ।
हामी कती तेस्रो देशको नागरिक हुने, कती बि.बि.सी र सिएनएनमा बन्द हड्ताल र गरीबिको डकुमेन्ट्री हेर्ने, कती आफ्नो देशको लागि हात फैलाउने त्यसैले हामी विश्वको जुन कुनामा भए पनि आफ्नो देशको लागि केही गरौ। जस्तो तरिकाले सहयोग गर्न सकिन्छ तेही गरौ।
Posted by archana at 5/27/2011 8 comments:
क्षमा गर अनी बिर्स – forgive & forget : story
नाइ आज मलाई केही गर्न मन छैन।
मेरो बोयफ्रेन्डले पिन्क सर्टको टाक खोल्दिन लाग्दा रोक्दै भन्छु।
एक हप्ता पछी यो भमराले फुल देख्न पाएको छैन हेर्न दिन्नौ।
अह!! आज मलाई केही कुरामा मुड छैन, म मुख ठुस्स पार्दै भन्छु।
ल अधेरी, अब भनिदिउ यो तिम्रो मुहारमा सनलाइट ल्याउन मैले के गर्नु पर्‍यो त दिच्च हाँस्दै सोध्छन ।
केही न केही मेरो जवाफ सधैंको जस्तो।
ए!! सुन त एउटा कुरा तिम्रो हुनेवाला सासुले तिमीलाई धेरै धेरै माया रे है आज बिहान मैले फोन गरेको थिए।
आज आमाको मुख हेर्ने दिन तिमीले हेर्यो त ?
ह्~या यस्तो कुरा नगर, मलाई यस्तो कुरामा विश्वाश छैन तिमी लाई था छ त म कस्तो छु भन्दै सन्केर मेरो बोयफ्रेन्डको काखबाट टाउको उठाएर फिजिएको कपाल सम्हाल्दै उठ्न खोज्छु।
त्यतिकैमा मेरो कपाल तान्दै एउटा रसियन आएर हाम्रो होटेलमा बसेको एक हप्ता भयो । मलाई भन्दै थियो तपाईंकि प्रेमिकालाई एक चोटि म भएको ठाउँमा पठाइ दिनु म्यानेजर साहेब। १०४ न को कोठामा बस्छ। त्यो मान्छेमा केही न केही छ।
तिमीले एक चोटि भेट्नै पर्छ।
मलाई अच्चम लाग्यो र हाँस्दै भने के हो तिमी यस्तो चरित्रहिन हौला भनेर मैले सोचेको पनि थिइन मलाई अब एक्लै होटेलको कोठामा पठाउने ।
मेरो विश्वाश गर न!! त्यो मान्छेले तिमीलाई एक्लै भेट्न चाहन्छ। अहिले सम्म त तिमिले मेरो कुरा कहिले पनि मानेकि छैनौ। मेरो लागि भए पनि पहिलो र अन्तिम चोटि मानी देउ ।
ल ठीक छ आज म तिम्रो लागि जान्छु । अब तिमी चाहन्छौ भने म बेश्या पनि बन्छु अनी भेट्ने मान्छेको नाम त होला नि? मुसु मुसु हाँस्दै सोध्छु ।
छ नि फिडोर गोर्ब्याचेब।
तिमी अहिलेनै गई हाल न फेरी ५ बजे त्यस्को चेकआउट छ ।
ल ल के सारो आतुरी हो आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई कलगर्ल बनाउन हाँस्दै स्कुटरको हेल्मेट उठाउदै आँखा सन्काउछु।
न्यूरोडबाट स्कुटर स्टार्ट गरेर म होटल हायात तिर बत्तिन्छु किन होला, के होला, म त्यो मान्छे लाई किन भेट्न जादै छु । दिमाखमा केही आइडिया थिएन। बाटोमा यस्तो जाम थियो कि चाबेल निर सडकमा एक इन्च पनि कतै सार्ने ठाउँ थिएन मलाई पनि मेरो जीवन यस्तै ठाउँमा आएर अड्किए जस्तो लाग्थ्यो । आफ्नो भन्नु एउटै आमा पनि आफ्नो होइनन् जस्तो लाग्थ्यो । सानै देखी आफु होस्टल बस्नु परेको र आमा कहिले पनि भेट्न नआएको कुराले मननै अमिलो भएर आउथ्यो । कहिलेकाही साथीको आमाले मेरोघरमा पुराइ दिनु हुन्थ्यो तर आमा उनिको बोयफ्रेन्डसँग र कामसँग यति बिजी हुन्थिन कि मलाई यो आमा शब्दसँग घिर्णा लाग्न थाल्यो । अब अहिले आएर आमाले लामो समय सम्म रहेको उनिको बोयफ्रेन्डसँग बिहे गर्ने निर्णयले त मलाई उनीको मुख पनि हेर्न मन थिएन । बरु म नजन्मेको भए हुन्थ्यो, बुवाले पनि सानैमा छोडेर जान पर्ने। मलाई संसारमा सबै भन्दा मन नपर्ने शब्दनै आमा थियो।
टि टि ट् पछाडि बाट ठुलो ट्रकको हर्न बज्छ । ए बाटो त खुली सकेछ म त कस्तो हुस्सु केही सोचे पछी सोचेको सोचै हुने। जाम धेरै खुलेछ म सरासर जोरपाटी हुँदै हायात होटेल पुग्छु र रिसेप्सनमा सोधेर फिडोर को ढोका ढक्ढकाउन पुग्छु।
अग्लो, मोटो र लामो दारी भएको मान्छेले ढोका खोल्दै अङ्रेजीमा तपाईं म्यानेजरको मुटुको ढुक ढुकी? आउनुस् भित्र मलाई था’ थियो तपाईं आउनु हुन्छ भन्ने अली विस्वस्त साथ् हास्दै फिडोरले भने मेरो नेपालको बसाइ एकदम राम्रो भयो। यो होटेलको म्यानेजरले धेरै सहयोग गर्नु भयो। तपाईंको बारेमा उहाले धेरै कुरा गर्नु हुन्थ्यो र मैलेनै तपाईंलाई भेट्ने इक्षा गरेको थिए। तपाईंलाई केही आपती त छैन। मैले पनि अनि कन्फीउज् पाराले अह् छैन् छैन भने।
ल यहा बस्नुस् सेतो कपडामा बस्न लगाए र ल अब आखा चिम्म गर्न गर्नुस् ।के भै राखेको थियो केही था थिएन तर भलादमी जस्तो देखिने फिडोरले भनेको मान्न म तयार थिए।
उनले आँखाले देखे जस्तै गरी मेरो र आमाको हरेक क्षण सबै भने जुन् कुरा मेरो बोयफ्रेन्डलाइ पनि था थिएन।
फिडोरले भने तिम्रो दिमाख धेरै कुरा रहेछ र मनमा धेरै पिडा पनि रहेछ।
हो यो सत्य हो मैले टाउको हल्लाउदै भने।
तिमी यो पिडा बाट मुक्ती पाउन सक्छौ उनी भन्छन।
साच्चै कसरी म सोध्छु?
उनले फेरी आँखा चिम्म गर्न लगाउछन र भन्छन अब तिमी यो पिडाबाट मुक्त हुन सक्छौ तर मैले भनेको मान्नु पर्छ।
मैले हुन्छ मान्छु भने। सुन आमा तिमी भन्दा ठुलो मान्छे तिमी जतीनै आमाको बारेमा नराम्रो सोच्छौ त्यतीनै तिमीलाई पिडा हुन्छ तिमी जिन्दगी भर कहिले पनि सुखी र खुशी हुन सक्दिनौ। म तिमी लाई २ वटा कुरा भन्छु त्यस्ले नै तिम्रो पिडा हटाउछ त्यो हो forgive and forget अर्थात क्षमा गर अनी बिर्स । फिडोरले तेती भने पछी मलाई के हुन्छ के हुन्छ म त्यहाँ अब एक सेकेन्ड पनि बस्न सक्दिन धन्यवाद भनेर म उनको मुख पनि नहेरी घर तिर फर्कन्छु।
बाटोमा फेरी जाम थियो मेरो छाती भत् भत् पोलेको थियो आमाले दु:ख गरेर मलाई नपढाएको भए म आज कसरी अफिसमा काम गर्ने हुन्थे र आमाको जागिरनै तेस्तै थियो नि बाहिर गई राख्न पर्ने सधैं स्कुलमा भेट्न पनि त आउन पाउनु हुन्थेन नि , फेरी म होस्टलमा बस्ने, बुवा बिहा गरेको २ बर्षमै बितेकोले आमा लाई पनि त एउटा साथी चाहिन्थ्यो नि फेरी म पनि त अब हुर्के अबको २ बर्षमा बिहा गर्छु त्यसपछी त आमा झनै एक्लै हुनु हुन्छ । उहालाई कस्ले हेर्छ ? अब म प्रतीको जिम्मेवार सकिएर बिहा गर्छु भन्दा के बिग्रियो त?
मलाई अब अर्कै किसिमको पिडा हुन्छ । मैले आमालाई क्षमा दिने होइन मलाई यतिका बर्ष सम्म मेरो लागि गरेकोमा धन्यबाट दिनु थियो । मैले आमाको कार्य लाई बिर्सने होइन आमाले मेरो लागि कती गर्नु भयो भनेर सधैं सम्झनु थियो ।
म कती सम्म स्वार्थी थिए भने आमाले २२ बर्ष सम्म मेरो लागि गर्नु भयो आज म कमाउने छु आज आमाको मुख हेर्ने दिनमा एउटा मिठाइको बट्टा समेत लगेर दिने कोशीस गरिन । धन्य ति आमा जसले अहिले सम्म सहिन!!
यि कुरा सोच्दा सोध्दै गौशाला को कपडा पसल अगाडि निलो कुर्था झुन्डाएको देख्छु । अली अली जाम छिचोल्दै कपडा पसलको आगनमा स्कुटर ल्यान्ड गर्छु । निलो कलर मेरो आमालाई मन पर्छ भन्दै मैले कुर्था किन्छु अनी सँगै जोडीएको मिठाइ पसलबाट मिठाइ पनि किन्छु । ए ल झन्डै बिर्सेंको साउजी सोना पाप्री पनि दिनुस् त मेरो आमालाई एकदम पर्छ । आफ्नो आमा प्रती हक जमाउदै सार्है प्रफुल्ल मुद्रामा माग्दै थिए हो बैनी मेरो आमा लाई पनि मन पर्थ्यो गएको साल बित्नु भयो तपाईं राम्रो सँग खुवाउनुस् भनेर साउजीले सोना पाप्रीको बट्टा दिदै भने ।
मिठाइ पसल बाट बाहिर निस्के बाटो अझै जाम नै थियो । पशुपती जाने बाटो तिर हेरे । सानी सानीले फूल प्रशाद बेची रहेकी रहेछिन । उनको सानो पसल अगाडि गए र बहिनी मलाई राम्रो राम्रो फुल को गुच्छा बनाएर देउ न । दिदी फुल मात्रै त महँगो पर्छ नि सानी नानी भन्दै थि । जती परे पनि परोस तिमी सँग भएका सबै भन्दा राम्रो राम्रो फुल छानेर गुच्छा बनाएर देउ मैले भने। कुन कुन कलरको हाल्दिउ दिदी ? सबै कलर जस्ले जिवनमा खुशी ल्याउछ । आज मेरो जीवन र खुशी दिने भगवानलाइ चढाउनु छ…
Posted by archana at 5/08/2011 14 comments: